माओवादीसँग एकता नहुदै एमालेमा विभाजन, को-को हुदैछन् अगल ? पत्रकार सम्मेलन आजै — Sanchar Kendra
माओवादीसँग एकता नहुदै एमालेमा विभाजन, को-को हुदैछन् अगल ? पत्रकार सम्मेलन आजै
माओवादी केन्द्रसँग एकता नहुदै एमालेमा विभाजन आएको छ । मंगलबार एकता संयोजन समितिको बैठक चलिरहँदा एमालेको भ्रातृ संगठन युवा संघ नेपालले भने विभाजनको निर्णय गरेको छ ।
युवा संघको नयाँ नेतृत्वको चर्चा चलिरहेका बेला नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले युवा संघ विभाजनको निर्णय गरेका हुन् । ४ बजे पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक जानकारी दिने तयारी भएको सचिव नरेश शाहीले बताए ।
अध्यक्ष राजीव पहारी, पूर्व अध्यक्ष महेश बस्नेतलगायतको समूह बामपन्थी एकतादेखि विधि र नियम मिच्न उद्दत रहेको ठहर गर्दै समानान्तर कमिटी गठनको निर्णय भएको शाहीले बताए ।
युवा संघलाई राजनीतिक संगठन भन्दा लुटीखाने भाँडो बनाएर चलाएको ठहर नेपाल समूहको छ । ‘कसको नेतृत्वमा समानान्तर कमिटी गठन गर्ने भन्ने छलफल जारी छ, समानान्तर कमिटी गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ’, शाहीले भने,‘विधि, प्रणाली र राजनीतिक काम नगरेका कारणले हाम्रो समूहले समानान्तर कमिटी गठन गरेर अघि बढ्नु उचित हुने ठहर गरेको छ ।’
नेपाल समुहमा युवा संघबाट उपाध्यक्ष दिलु पन्त, सचिव शाही, क्रान्ति बुर्लाकोटीलगायत रहेका छन् । ‘पेलेर संगठन चलाउने, व्यक्तिवादी चरित्रको हावी गराउने प्रवृत्ति यो सरकार असफल बनाउने षडयन्त्र पनि भन्ने ठहर बैठकले गरेको छ’, शाहीले भने ।
भ्रातृ संगठनको समायोजनका विषयमा चर्को बहस चलिरहेका बेला यता एमाले भ्रातृ संगठन भने विभाजनको निर्णयमा पुगेको हो ।